Waraana Yaman: Daa'imman dabalataa miil tokko beelaaf saaxilaman - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Mohammed Awadh/ Save the Children
Goodayyaa suuraa Mucaa waggaa 14 hanqina nyaataa mudateen magaalaa Amraanitti yaalamaa jirtu
Ijoolleen Miiliyoona tokkoo ol tahan Yamanitti beelaaf saaxilamuu Save The Children akeekkachiise.
Gatiin nyaataa dabalaa adeemuu fi humni sharafa maallaqa Yaman dadhabaa adeemuunsaa akka rakkoon kun hammaatu taasiseera jedhe dhaabbatni miti mootummaa gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu Save The Children.
Sodaan guddaan biraa nannichatti uumame immoo waraana naannoo buufata doonii Hudaaydaatti uumame yoo tahu, naannoolee finciltootaan qabaniif hulaan deeggarsi ittiin galuu danda'u asiin qofa tahuusaa dhaabbatichi himeera.
Amma walumaagalatti lakkofsi daa'immanii beelaaf saaxilamanii Yaman keessatti miiliyoona 5.2 gaheera, jedha dhaabatni gargaarsaa kun.
Pirezidantiin duraanii Yaman 'ajjeefaman'
Saa'udiin Yaman seenuu dhorkuun ishii gargaarsa kennuuf 'baay'ee rakkise'
Misaa'elli finciltoonni Yaman dhukaasan 'kan Iraani'
Waraanni Yaman keessaa maaliif gaggeeffama?
Bara 2015 gara jalqabaa irraa eegaluun erga gareen finciltoota Huutii Yaman gara Lixaa bal'inaan to'atanii, pirezedaantii biyyittii yeroo sanaa Abdarrabuu Mansur Haadii akka biyyaa bahu taasisanii as waraanni hamaan gaggeffamaa jira.
Waraanichi garee jaalatoota Iraaniin akka hammatu kan taasifame yoo tahu, Tokkummaa Imireetotaa, Sawud Arabiyaa fi biyyootni Arabaa biroo torbas gidduu galuun akka mootummaan biyyittii irra deebiin ijaaramu taasisuuf yaalaa turaniiru.
Miidhaa waraanichi fide keessaa hojjetoota mootummaa fi barsiisotaaf miindaan kaffalamu akka inni turu taasiseera . Sababa waraana kanaan namootni baay'een osoo miindaa hin argatiin hanga waggaa lamaa turanis jiru.
Warrumti miindaa argatan iyyuu erga waraanni jalqabee gatiin nyaataa akka malee waan dabaleef bitanii fayyadamuu hin dandeenye.
Gatiin nyaataa 68% dabaleera. Humni sharafa Riyaalii Yamanis 180%'n gadi bu'eera akka dhaabatni [Save The Children] jedhetti.
Tibbanas sharafni Riyaalii kun seenaa biyyittii keessatti isa gadi aanaa irra waan gaheef rakkoo hamaa fiduu danda'eera.
Hojii gaggeessan dhaabbatichaa Heelee Torning, Daa'imman Yaman keessaa miiliyoonota tahan guyyaa itti aanu nyaatni eessaa akka isaaniif dhufu illee hin beekan jedhan.
Dabalataan daa'imman hospitaalati yaalamaa jiran hundi akka malee beela'uun osoo boo'anii, iyyaniin arge, qaamnisaaniis baay'ee dadhabeera jedhe .
Daa'imman Yaman dhukaasa boombiidhaa hanga beela hamaa kanaatti dararamaa jiran dhibee Koleeraanis dhumaa jiru.
Haala kanaan kan itti fufu yoo tahe dhalootni Yaman amma jiru jiru kun itti fufuu hin danda'u jechuun dhaabatni [Save The Children] kun akeekkachiiseera.
Ji'a kana jalqabatti qofa daa'imman umuriinsaanii waggaa shanii gadii kuma 400 tahan dhibee hanqina nyaataa isaan mudate irraa yaaluu beeksisee xumura bara kanaatti daa'imman kuma 36 tahan du'uu danda'us jedheera.
Waraana Yaman keessatti ka'een namootni kuma 10 tahan du'uun kuma 55 kan tahan ammmoo madaa'aniiru.
Goodayyaa suuraa Kaartaa qabiyyee Yaman agarsiisu
Yamanitti Kooleeraan kompitaraan to'atamaa jira
28 Hagayya 2018
Misaa'elli finciltoonni Yaman Riyaaditti dhukaasan 'mallattoo Iraan' ofirraa qaba
20 Muddee 2017
'Ganama yeroon hirribaa dammaqu gitaara ykn kiboordii taphachuun araada'